Wedzera CSS Mhuka kune Yako WordPress Siti neCSS Hero's Plugin | Martech Zone
CSS Gamba chishandiso chakanakisa che CSS kugadziridzwa muWordPress madingindira kwenguva yakati rebei. Zvishandiso zvakaita seizvi zviri kuita zvigadziriso zvive nyore kune vashandisi veWordPress avo vanoda kugadzirisa magadzirirwo avo, asi vachishaya ruzivo rweCoding rwekunyora runodikanwa.
CSS Gamba Zvimiro Sanganisira
Kunongedzera uye Dzvanya Chinongedzo - mbeva hover uye tinya chinhu chaunoda kugadzirisa uye kuchigadzirisa kuti chikwane zvaunoda.
Dingindira Agnostic - Wedzera simba reHero kumatimu ako, hapana imwe kodhi pane yako madimikira inodiwa uye inobvumira kudzora kwakazara pane zvivakwa \_ zvinhu zvaunoda kuti zvigadziriswe.
Rarama Midziyo-Mamiriro Edhi - Chinja uye gadzirisa maratidziro anoita dingindira rako pamidziyo inochengetwa nemaoko, wedzera mudziyo-wakasarudzika marongero anorarama.
Akangwara Ruvara Kunhonga - Kuwedzera kubata kwako wega kumatimu ako izvozvi zvave nyore sekunongedzera nekudzvanya vara, Gamba rinochengetera ako achangoshandiswa mavara.
Shandisa mazana matanhatu+ Mafonti - Wedzera rako rekubata rekirasi uye hunhu kune ako WordPress Themes nekusarudza kubva pane yakafarisisa runyorwa rweyakakurumbira webhu fonti uye glyphs
Yakaomarara CSS - Kuvaka gradients, bhokisi mimvuri, zvinyorwa-mimvuri uye zvese zvazvino CSS zvivakwa ikozvino poindi uye tinya nyaya.
Kwete Kiyi-In - Unoda kuenda kune imwe chikuva? Hapana kunetseka, gamba rese rakagadzira CSS rinogona kutumirwa kunze kamwe chete.
CSS Inogadzirisa Nhoroondo - CSS Gamba rinongo chengeta ako ese marongedzero mune yakazara nhoroondo rondedzero, kudzokera shure uye kumberi munhoroondo nhanho kuri nyore sekukanya bvisa \_ redo mabhatani.
CSS Gamba Inspector - Inspector ndeye CSS Gamba Plugin iyo inobvumidza yakawedzera kutonga paHero inogadzirwa kodhi. Uine muongorori unogona kunatsiridza, kugadzirisa, kubvisa gamba rakaburitswa gamba kana kutowedzera rako raunowanzoita neyaunofarira yekuongorora yewebhu senge Chrome's Inspector kana Firebug.
Chiedza Mutsetse - CSS Gamba rakavakwa kubva munzvimbo kusvika pakuva "mwenje tsoka" plugin, chaizvo inoshandisa zviwanikwa chete painotangisa mhenyu css mupepeti. Izvo hazvizononoke pasi yako WordPress admin kana kuisanganisa ine yakawanda sarudzo mapaneru. Iyo inoshandisa zvishoma ndangariro painenge ichiita basa chairo rinobatsira.
Ichangoburwa ndiyo CSS3 Animate It raibhurari, inopa yakawanda inotonhorera mhedzisiro mhedzisiro, kusanganisira bounce, fade, flip, pulse, tenderera, zunza, uye fambisa. Dzvanya kuburikidza nevhidhiyo yakaverengerwa mune ino positi.
Tags: kuchangamukacss mifananidzocss bouncecss kuperacss flipcss gambacss magamba madingindiracss kufambacss tendereracss zunzacss wiggleWordpress kuchangamukaShokoPress csswordpress theme
Zvichida Iyo Yakaipisisa Domain Registrar Yakagara